Minaaradda birta korantada Aaladda korantada Awoodda waa nooc ka mid ah qaab-dhismeedka birta oo xajiya masaafo gaar ah oo ammaan ah oo u dhexeeya qaboojiyayaasha taageeraya, siligga dhulka iyo dhismayaasha dhulka ee khadka gudbinta. Laga soo bilaabo qaab dhismeedka: munaaraddii guud ee birta xagasha, birta biibiile birta ah iyo tuubbada birta birta ah munaaradda hoose ee cidhiidhiga ah. Munaaradda steel xagal guud ahaan waxaa loo isticmaalaa duurka ku, iyo ulaha biibiile steel iyo biibiile steel munaaraddii hoose cidhiidhi guud ahaan loo isticmaalo aagga magaalada maxaa yeelay aagga dabaqa waa ka yar yahay ...
Minaaradda korontadu waa nooc ka mid ah qaab-dhismeedka birta oo xajiya masaafad gaar ah oo ammaan u dhexeysa qaboojiyeyaasha taageeraya, siligga dhulka iyo dhismayaasha dhulka ee khadka gudbinta. Laga soo bilaabo qaab dhismeedka: munaaraddii guud ee birta xagasha, birta biibiile birta ah iyo tuubbada birta birta ah munaaradda hoose ee cidhiidhiga ah. Munaaradda steel xagal guud ahaan waxaa loo isticmaalaa duurka ku, iyo ulaha biibiile steel iyo biibiile steel munaaraddii sagxad cidhiidhi guud ahaan waxaa loo isticmaalaa aagga magaalada maxaa yeelay aagga dabaqa waa ka yar yahay munaaraddii steel xagal.
Minaaradda korontada xagasha korontada waa nooc ka mid ah qaab-dhismeedka birta kaas oo hayn kara masaafad gaar ah oo ammaan ah oo u dhexeysa qaboojiyeyaasha taageeraya iyo dhismooyinka dhulka ee khadka gudbinta. Marka loo eego qaabkeeda, guud ahaan waxaa loo qaybin karaa shan nooc: Mashiinka korantada nooca korantada, munaaradda tamarta nooca dusha sare, ilaa nalka korantada nooca, nooca qalalan iyo nooca baaldi. Ujeedada, waxaa loo qaybin karaa munaarad tamarta nooca xiisadda, munaarad toosan oo nooca toosan ah, munaarad tamarta xagal noocan ah iyo munaarad tamarta nooca loo yaqaan 'transposition Tower' Astaamaha qaabdhismeedka munaaradda (beddelka munaaradda booska waji) munaaraddu waa in noocyada kala duwan ee munaaraddu ay ka tirsan yihiin qaab dhismeedka hawo-mareenka, xubnahooduna badiyaa waxay ka kooban yihiin bir isku mid ah xagal siman ama bir xagal isku dhafan. Q235 (A3F) iyo Q345 (16Mn) guud ahaan waa la isticmaalaa. Xidhiidhka ka dhexeeya xubnuhu wuxuu ka samaysan yahay handarraabbadeedii qallafsanaa, oo munaaradda oo dhammuna waxay ku xidhan tahay bir xagal ah iyo bir isku xidha Qaybo ka mid ah sida cagaha taariiqda waxaa lagu dhejiyey shirkii dhowr taariko bir ah Sidaa darteed, waxay ku habboon tahay galvanized kulul, xinjirowga lidka ku ah, gaadiidka iyo kacsiga. Taawarka oo dhererkiisu ka yar yahay 60m, ciddiyaha cagaha waa in lagu dhejiyaa mid ka mid ah maaddooyinka waaweyn ee munaaradda si loogu fududeeyo shaqaalaha dhismaha inay ka fuulaan munaaradda.
Xiga: Munaaradda isgaarsiinta
Dahaarka Isgaarsiinta Birta ahaanta
Tower Isgaarsiinta steel
Munaaradda Isgaarsiinta Munaaradda isgaarsiinta waxay u egtahay nooc ka mid ah munaaradda gudbinta calaamadaha, oo sidoo kale loo yaqaan munaaradda gudbinta calaamadaha ama munaaradda calaamadaha. Shaqadeeda ugu weyni waa inay taageerto signalada iyo anteenada gudbinta calaamadaha. Waxaa loo adeegsadaa waaxaha isgaarsiinta sida China Mobile, China Unicom, telecom, nidaamka meeleynta satalaytka gaadiidka (GPS). 1 、 Astaamaha iyo adeegsiga munaaradda isgaarsiinta 1. Taallada isgaarsiinta: waxay u qaybsan tahay dhulka ...
Isgaarsiinta muuqaalka Isgaarsiinta munaaradda isgaarsiinta waxaa ka mid ah soo degida munaaradda isgaarsiinta muuqaalka caadiga ah iyo soo dejinta muuqaalka qurxinta qurxinta qurxinta. Waxay leedahay dhammaan astaamaha dhammaan munaaradaha muuqaalka caadiga ah ee xilligan xaadirka ah. Waa isku darka ugu fiican ee munaaradda isgaarsiinta muuqaalka guud ee dhulka iyo anteenada qarsoon ee qurxinta, waana sii dheereynta iyo horumarinta alaabada shirkadeena jihada sare; Fikradda ugu weyni waa ...
Tower Tower Xagasha Electric, Taawarrada birta korontada, Taawarka Isgaarsiinta Dowladda Hoose, Tower Xaraynta Power Steel, Qaab dhismeedka birta tuubada, Qaab dhismeedka Birta Prefab,